Abavelisi beeNdlu zePompo zokuTywina iTshayina kunye nabathengisi | KAIQUAN
Ukuhamba: 10-320m3 / h
Intloko: Ukuya kuthi ga kwi-34m
Ixabiso PH: 4 ~ 9
Impompo ayinakusetyenziselwa ukwenziwa kwezinto ezinobungozi kunye nezinkulu kakhulu.
Ukuncamathela kwiZinto eziluncedo zokuSusa iPompo yelindle:
1.Imodyuli yokusika ezimeleyo, umsebenzi wokusika olungileyo, akukho lula ukubhloka. Logama nje inokungeniswa kwizibuko lokutsala, inokucolwa ngokulula. Ukuhambisa amanzi amdaka amdaka, iitanki ze-septic, ilindle lasesibhedlele kunye neminye imithombo yeendaba equlathe iintsinga ezinde nezibhityileyo. Amasuntswana amakhulu awanakuthuthwa. Umsebenzi wokutshiza ungathintela impompo kunye nemibhobho ekuvinjelweni bubutyobo kwilindle. Nangona kunjalo, ukuze kuqinisekiswe ngcono ukuthembeka kokusebenza kwempompo, kuyacetyiswa ukuba kufakelwe isixhobo sokuthintela ubumdaka kwindalo engaphandle kwaphakathi.
2. Imodyuli yokusika yenziwe ngentsimbi engenasici kwaye iye yafumana unyango lobushushu. I-blade inobunzima obaneleyo kwaye inokugcina amandla okusika ixesha elide. Ukuba amandla okwehla ancipha ixesha elide, imodyuli yokusika inokuthi ithathe indawo ngokwahlukileyo.
Zombini icala lempompo kunye necala leemoto zixhotyiswe ngamatywina oomatshini ukufezekisa ukukhuselwa kwesitywina se-shaft esinokuthenjwa semoto. Ioyile egumbini leoyile iyalalisa ngokupheleleyo kwaye iyapholisa ukutywina komatshini.
Egqithileyo I-KQSN Split Case Pump
Okulandelayo: I-Axial engena emanzini, iMpompo yokuHamba kweMixed
Ukugoba uMzobo woLwakhiwo lwePompo yoGutyulo lwelindle
Ukugoba uMzobo weMpompo yoGutyulo lwelindle kunye nenkcazo
ukumpompoza kwamanzi, impompo yokuhambisa amanzi, impompo yokuhambisa amanzi, imoto engena emanzini, impompo engena emanzini, impompo yokuntywiliselwa, impompo yesump engenayo, impompo evulekileyo yokuvula, impompo yolwandle